‘ဒီလို အကြံပြုပုံမျိုးကို ယုံတောင်မယုံနိုင်ဘူး’ လို့ ဒီရာသီကို ဖျက်သိမ်းရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြတဲ့ ဖာဒီနန် ၊ ဘရာဒီ တို့အဖွဲ့ကို တည်ပြောလိုက်တဲ့ လီဗာပူးဂန္တဝင် - SPORTS MYANMAR
လီဗာပူး ဂန္တဝင် ကစားသမားကြီး ဂျွန်အဲရစ်ချ်က လီဗာပူး အသင်း အနေနဲ့ ၂၀၁၉-၂၀ ပရီးမီးယားလိဂ် ရာသီကနေ သူတို့ စွမ်းဆောင် ခဲ့တာနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ အရာကို ပြန်လည် ရရှိဖို့ မဖြစ်မနေ လိုအပ်တယ်လို့ ဆိုလိုက် ပါတယ်။ ယာဂန်ကလော့ ရဲ့ အသင်းဟာ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ် မှာ ၂၉ ပွဲ ကစား ရမှတ် ၅ မှတ်သာ ဆုံးရှုံး ထားကာ ဒုတိယ နေရာက မန်စီးတီး ကို ရမှတ် ၂၅ မှတ် အသာနဲ့ ဦးဆောင်လျက် ရှိနေ ပါတယ်။
လီဗာပူး အနေနဲ့ နှစ် ၃၀ အတွင်း ပထမဦးဆုံး အကြိမ် အမှတ်ပေးဖလား ကို သိမ်းပိုက် နိုင်ရန် အတွက် နောက်ထပ် ရမှတ် ၆ မှတ်သာ လိုအပ် ပါတော့တယ်။ သို့ပေမယ့်လည်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် အခု ချိန်မှာ ပရီးမီးယားလိဂ် ဘောလုံး ရာသီကို ရပ်နား ထားခဲ့ပြီး အက်ဖ်အေဟာ အင်္ဂလန် ပြည်တွင်းလိဂ် ပွဲစဉ် အားလုံးကို လာမည့် ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့ အထိ အနည်းဆုံး ရွေ့ဆိုင်း ထားခဲ့ ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ဒီဗိုင်းရပ်စ် ဟာ ဥရောပ တစ်ခွင်မှာ ကြီးမားစွာ ပျံ့နှံ့လျက် ရှိနေတာကြောင့် ဧပြီလကုန် မှာတောင် ပြိုင်ပွဲတွေ ပြန်လည် စတင်ဖို့ သေချာတဲ့ အနေအထား မရှိသေး ပါဘူူး။ ဒါပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ် ကြာသပတေးနေ့က ပရီးမီးယားလိဂ် အစည်းအဝေး မှာတော့ တာဝန်ရှိသူတွေ အပါအဝင် ကလပ် အသင်း အားလုံးဟာ အမျှတဆုံး နည်းလမ်း ဖြစ်တဲ့ ဒီရာသီ ပြိုင်ပွဲကို ပြီးဆုံးအောင် ကစားသွားဖို့ သဘောတူ ခဲ့ကြ ပါတယ်။
အဲဒီမတိုင်မီ ဝက်ဟမ်း ဒုက္ကဋ္ဌဟာ သူ့အသင်း တန်းမဆင်းရဖို့ အတွက် ဆန္ဒတစ်ခုကို ရှေ့တန်းတင်ကာ ဒီရာသီ ပြိုင်ပွဲကို ဖျက်သိမ်းလိုက်တာ အကောင်းဆုံး ဆိုပြီး The Sun မှာ ဆောင်းပါးတစ်ခု ရေးသားခဲ့မှု အတွက် ဝေဖန်မှုတွေ ခံခဲ့ ရသလို လီဗာပူး မုန်းတီးသူ အချို့ ကလည်း ဒီစကားကို ထောက်ခံ ပြောဆိုမှုတွေ ရှိခဲ့ ပါတယ်။ တာဝန်ရှိသူတွေ ရဲ့ ပြိုင်ပွဲကို ပြီးဆုံးအောင် ကစားချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့် လီဗာပူး အပါအဝင် ၊ ဥရောပဝင်ခွင့် အတွက် မျှော်လင့်ချက် ရှိနေတဲ့ အသင်းတွေ ၊ တန်းတက်ဖို့ ကြိုးစား နေကြတဲ့ အသင်းတွေရဲ့ ပရိတ်သတ်တွေဟာ စိတ်အေး ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီကြားထဲမှာ လီဗာပူး မုန်းတီးသူ ယူနိုက်တက် နောက်ခံလူဟောင်း ဖာဒီနန်က တစ်စခန်းထလာ ခဲ့ပြီး ဒီရာသီ ကို မရှိသလို သတ်မှတ်ကာ ဗိုင်းရပ်စ် အန္တရာယ် ကင်းတာနဲ့ ရာသီသစ်ကို စတင်သင့်ကြောင်း အကြံပြုမှု ထွက်ပေါ် လာခဲ့ပြီး ဒီပြောဆိုမှုကို ထောက်ခံသူ နည်းပါးခဲ့ကာ ဝေဖန်သံတွေ ကသာ ဆူညံ ခဲ့ပါတယ်။ လီဗာပူး ဂန္တဝင် အဲရစ်ချ် ကတော့ သူ့ရဲ့ အသင်းဟောင်းဟာ ဒီရာသီ သူတို့ စွမ်းဆောင်ခဲ့တာနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ အရာ ပြန်လည် ရရှိဖို့ မျှော်လင့်ကြောင်း ဆိုခဲ့ပါတယ်။
အဲရစ်ချ်က “ကျွန်တော် ကတော့ လီဗာပူး တို့ ဒီရာသီ သူတို့ လုပ်ဆောင် ခဲ့တာနဲ့ ထိုက်တန်တာကို ရဖို့ မျှော်လင့် ထားပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ပရီးမီးယားလိဂ် အမှတ်ပေးဖလားပါပဲ။ လူတွေ ကတော့ ဒီရာသီ ပြီးဆုံးနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောဆို နေကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီရာသီကို ပြီးဆုံးအောင် မဖြစ်မနေ ကစား သွားရပါမယ်။ ဒီရာသီ ကို ပြီးဆုံးအောင် မကစားဘဲနဲ့ လာမည့် ရာသီ လိဂ်ပြိုင်ပွဲကို မစတင်သင့် ပါဘူး။
သူတို့ ဖြစ်ချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက် က ဘာလဲ? ဒီရာသီ ပြိုင်ပွဲ ရဲ့ ၇၅% ပြီးသွား ချိန်မှာ ဒါကို ပယ်ဖျက်ပြီး ရာသီသစ် ပြန်လည် စတင်ချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက် က ဘာလဲ? လာမည့်နှစ် ပြိုင်ပွဲကို မေ့ထားလိုက် စမ်းပါ။ ဒီရာသီ ပြိုင်ပွဲဟာ လာမည့် ဘောလုံး ရာသီ ထဲကို ၂ လ ၃ လ ၄ လ လောက် ပါသွား ခဲ့မယ် ဆိုရင်တောင် ဒါကို ပြီးအောင် ကန်သွား ရပါမယ်။ ဘာအကြောင်းနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် လာမည့် ရာသီကို နောက်ဆုတ် ကျင်းပ သွားရမှာ ဖြစ်ပြီး ပွဲချိန်ဇယား အပြောင်းအလဲတွေတော့ လုပ်သွား ရမှာပါ။
အကယ်၍ ပြိုင်ပွဲဟာ ခရစ်စမတ်လောက်မှ ပြန်လည် စတင် နိုင်မယ် ဆိုရင်…ဥပမာ အားဖြင့် ဒီပြိုင်ပွဲကို ၂ ခြမ်းခွဲပြီး ကျင်းပနိုင်တဲ့ ပုံစံလည်း ရှိပါတယ်။ ထိပ်ဆုံး ၁၀ သင်း ကို အမှတ်ပေးဖလား ဒါမှမဟုတ် ဥရောပ ဝင်ခွင့် အတွက် ယှဉ်ပြိုင်စေတဲ့ ပုံစံမျိုးပေါ့။ ကျန်တဲ့ အောက်ဆုံး ၁၀ သင်း ကတော့ ပရီးမီးယားလိဂ် မှာ တင်ကျန်ရစ်ဖို့ ကစား စေတာပါ။ မပြီးမသတ်ဘဲ ပြိုင်ပွဲကို ပယ်ဖျက် လိုက်လို့ မရပါဘူး။ ဒီလို အကြံပြုတဲ့ ဘယ်သူ မဆို သူတို့ရဲ့ အတွေးဟာ မှားနေ ကြပါတယ်။ ဒီလို အကြံပြုပုံမျိုးကို ကျွန်တော် ယုံတောင် မယုံနိုင်ပါဘူး။” လို့ ဆိုလိုက် ပါတယ်။
လီဗာပူး ပရိတ်သတ်တွေ ကတော့ ဖာဒီနန်ဟာ ခါးသီးပြိုင်ဘက် ရဲ့ အောင်ပွဲကို မမြင်တွေ့ လိုတဲ့ ဆန္ဒကို ဦးစားပေးကာ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ပြသနာတွေကို မစဉ်းစားဘဲ ပြောနေတယ်လို့ ဝေဖန်နေကြ ပါတယ်။ လူတော်တော် များများ ကလည်း ဒီရာသီ ပြိုင်ပွဲကို ပယ်ဖျက်ခြင်းဟာ လီဗာပူး သာမက ဒီရာသီ တစ်လျှောက်လုံး အကောင်းဆုံး အားထုတ် လာခဲ့တဲ့ အခြား ကလပ်တွေ အတွက်လည်း မျှတတဲ့ ပြောဆိုမှု မဟုတ်ဘူးလို့ ယူဆ ကြပါတယ်။
ဒီရာသီကို ဖျက်သိမ်းမယ် ဆိုရင် ကိစ္စ အားလုံးဟာ ဖာဒီနန် ပြောတာလောက် လွယ်ကူတဲ့ အခြေအနေမှာ ရှိမနေပါဘူး။ ဒီရာသီ ပြိုင်ပွဲကို ဖျက်သိမ်းမယ် ဆိုရင် ဖာဒီနန် ပြောသလို လီဗာပူး တစ်သင်းသာ နစ်နာမှာ မဟုတ်ဘဲ ဥရောပ ဝင်ခွင့်ကို တိုက်ပွဲဝင်ကာ ကလပ်ကို နောက်တဆင့် တက်ဖို့ ကြိုးစား နေကြတဲ့ အသင်းတွေ ၊ တန်းမဆင်း ရဖို့ မျှော်လင့်ချက် ရှိနေတဲ့ အသင်းတွေ ၊ ပရီးမီးယားလိဂ် ကို တန်းတက် နိုင်ခဲ့မယ် ဆိုရင် ဘဝ ပြောင်းသွား နိုင်တဲ့ အသင်းတွေ အတွက် နစ်နာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပြိုင်ပွဲကို ပယ်ဖျက်မယ် ဆိုရင် နစ်နာတဲ့ အသင်းတွေရဲ့ တရားစွဲဆိုမှုတွေ ရှိလာမှာ ဖြစ်ပြီး ပရီးမီးယားလိဂ် အနေနဲ့လည်း ရုပ်သံဋ္ဌာနတွေကို စာချုပ် ဖောက်ဖျက်မှု အတွက် ပေါင်သန်း ၇၅၀ ကျော် လျော်ရမယ့် အရေး နဲ့ ကလပ်တွေ ဘက်ကလည်း စပွန်ဆာကြေးတွေ ပြန်လျော် ရမယ့် အရေးလည်း ရှိနေပါတယ်။
မန်စီးတီး ကို ချန်ပီယံလိဂ် မှာ ဝင်မပြိုင်စေဖို့ ပူးပေါင်းအဆိုတင်သွင်းကြမယ့် EPL အသင်းကြီးများ